▷ 🎮 Njem dị mkpirikpi 【Ntụle na nbudata ✅】 - 【Ntụnyere】 2022
🎮 Njem dị mkpirikpi 【Ntụle na budata ✅】
N'iji mma na-atọ ụtọ na nke na-adịghị mma, Mkpirisi Hike bụ ihe na-adọrọ mmasị gbasara ọ joyụ nke ịga njem na izute ndị enyi ọhụrụ.
Njem Nature Nature A Short Hike na-echeta ọṅụ nke ịgbatị ụkwụ gị n'ụzọ. Ebe obibi ya nwere pikselụ juputara na nlegharị anya na ụda nke ime obodo maara nke ọma na ndụ n'ezie, dị ka mmiri na-agba ngwa ngwa n'ime ọhịa ma ọ bụ nnabata nke ndị njem ndị ọzọ ka ha na-aga n'ime ọhịa, n'akụkụ mkpọda nke ugwu ahịhịa. Dịka onye Canarian na-eto eto aha ya bụ Claire, otu n'ime agwa mbụ ị ga-ezute bụ frog nwere nha pint n'akụkụ osimiri dị na Hawk Peak Provincial Park, na-agbasi mbọ ike ịrụ nnukwu ụlọ ájá. Nsogbu ya, n'ụzọ dị mwute, bụ na ọ na-eji shọvelụ zuru oke, ngwá ọrụ na-adịghị mma nke na-adịghị mma maka ezigbo ọrụ ọkpụkpụ ájá. Ị nwere ike inye ya shọvel egwuregwu ụmụaka ma, ka oge na-aga, lelee ụlọ ya dị umeala n'obi ka ọ na-eji nwayọọ nwayọọ ghọọ alaeze ukwu ájá na-agbasa - naanị ọmarịcha ọmarịcha anya.
Nke a bụ naanị otu n'ime ọtụtụ ihe nkiri zuru ezu ị ga-achọpụta na Short Hike, aha nyocha gbasara ịgagharị n'okporo ụzọ na-agbagharị agbagharị na apịtị nke ogige. Ọ bụ egwuregwu nwere ebumnuche dị mfe na nke otu: Trek gaa n'elu ugwu Hawk Peak, n'ihi na ọ bụ naanị ebe enwere nnabata ekwentị. Agbanyeghị na ọ dị gịrịgịrị, enwere ọtụtụ mmemme ị ga-achọ ka ị na-arụsi ọrụ ike iji ruo n'elu. Ị nwere ike ịnakọta mkpuru mmiri na osisi n'ụzọ, nyere ndị njem ndị ọzọ aka na nsogbu ha, ma ọ bụ tụba nko gị n'ime osimiri ndị umengwụ n'olileanya ịnwụde azụ dị ụkọ. Ime nke a na-ebutekarị ụgwọ ọrụ, ma ọ bụ n'ụdị nku ọla edo, otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na egwuregwu ahụ, ma ọ bụ ngwá ọrụ na ngwa dị iche iche. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ihe ndị a bụ ihe ịchọ mma, ndị ọzọ na-emeghekwu ikike maka Claire, dị ka ike ịgba ọsọ, fega n'ihu, ma ọ bụ gbapụ n'àgwàetiti ahụ mara mma.
Ọ bụ ihe na-achọsi ike iche banyere ha dị ka ajụjụ akụkụ iji mezue, mana nke ahụ meriri ebumnuche nke ahụmịhe ndị a - ezigbo ụgwọ ọrụ na-enweta ọmarịcha mma nke oge ndị a. Nke a abụghị n'ụzọ ọ bụla ntụpọ akụkọ; Ọ bụ obere ihe atụ ndị a na-achịkọta ịdị ukwuu nke ịgafe nnukwu ugwu ugwu nke A Short Hike. Mmekọrịta gị na ndị ọbịa ndị ọzọ, dị ka ịgbaso njem onye na-ese ihe na-anụ ọkụ n'obi maka mkpali n'okike, mgbalị siri ike ọbụna na mbara ala a mara mma, na-ebutekarị nkwubi okwu na-emetụ n'ahụ. Nzute ndị ọzọ na-edugakwa n'ụfọdụ akụkọ na-atọ ọchị n'ezoghị ọnụ, dị ka egwuregwu nzuzo ọ na-echeta na ya na ndị enyi ya na-akpakọrịta.
Akwụkwọ ndekọ aha mara mma nke egwuregwu a na-atọkwa ụtọ, site n'ịnụ ọkụ n'obi nke ndị otu ebe a na-arị elu ruo n'ọkwa ọzọ nke tụfuru ikike ịma ụlọikwuu ya n'ihi azụ agụụ. Agbanyeghị, ịchọta ihe omimi zoro ezo n'ime oke ọhịa osisi oak na n'etiti ihe ndị a gbahapụrụ agbahapụ na-atọ ụtọ karịa ihe nkiri ndị a. Enwere ezigbo ọṅụ na kọmpat maka ịchọpụta saịtị dị ka ọdọ mmiri gbahapụrụ agbahapụ, ụlọ ọkụ gbahapụrụ agbahapụ ma ọ bụ ụfọdụ ahịhịa na anụmanụ mara mma nke agwaetiti ahụ.
N'otu oge ahụ, Claire, bụ́ nnụnụ nwere nkà karịsịa, na-eme ka ịgagharị n'ogige ahụ bụrụ ikuku. Njem dị mkpirikpi na-eme ka ọ dị mfe - ọtụtụ n'ime ikike gị na-adabere na nku ọla edo ndị ahụ e kwuru n'elu, nke na-arụ ọrụ dị ka ụdị ume ike na-enye gị ohere iji ekpomeekpo karịa mee njem gị. Ọ bụghị nanị na Claire nwere ike iji ụkwụ ya gagharịa n'ụzọ ahụ, kamakwa ọ pụkwara ife efe, see n'elu mmiri, na igwu mmiri, yana ịrịgo ọbụna ọnụ ọnụ ugwu dị ka nwa nnụnụ na-anụ ọkụ n'obi. Ọbụlagodi mwụpụ n'elu ugwu dị elu adịghị emerụ ahụ karịa ego e merụrụ emerụ na ikekwe nkeji ole na ole nke mgbalị efu.
N'ịrịgoro elu na iji feathers ndị a na-achọsi ike na-awụ elu okpukpu abụọ n'ikuku, mmeghari mmegharị nke Claire na-enye ya ohere ịgagharị n'akụkụ ogige ahụ siri ike, na-agba ume nyocha n'ezie ma na-enye ya ohere ime nke ahụ n'ụzọ nke ya. Ka ị na-erute n'elu ugwu Hawk Peak Mountain chọrọ ọtụtụ nku, obi dị m ụtọ na a pụrụ ịchọta ha n'ụzọ dị iche iche: n'èzí, na-apụ na oghere na crannies, ma ọ bụ na-ere ya n'ụzọ dị ntakịrị site na ogbe ndịda. ma ọ bụ onye na-enyo enyo ma na-ere ere. Nke ahụ kwuru, ọ dịghị mgbe a na-ata gị ahụhụ maka ịghara nke ọma na nyocha gị. Ọbụlagodi na ị nọghị n'ọnọdụ inyocha, ọ ga-ekwe omume ịnakọta feathers zuru oke iji ruo n'elu naanị site n'ịrụ ọrụ ụfọdụ na igwu ha dị ka akụ e liri.
Iji kwekọọ na mwepụta nke A Short Hike na Nintendo Switch, onye nrụpụta Adam Robinson-Yu ejirila ọdịnaya ọhụrụ kwalite egwuregwu ahụ. Nkwalite gụnyere ịkwọ ụgbọ mmiri dị elu site na ogige ahụ n'ime ụgbọ mmiri na-agba ọsọ ọhụrụ. Claire nwere ike chụpụ ajọ nwa nwoke a na-agbahapụ anụ ọhịa, na-eji injin ya dị elu nke na-eme mgbanwe agba ọsọ gafere mmiri gbara ya gburugburu wee banye n'agwaetiti ndị dị nso. Ọ bụ nkwalite nnabata site na igwu mmiri dị anya n'oké osimiri ruo n'oké osimiri ma na-enye ụzọ ọzọ iji hụ akụkụ ndị ọzọ nke Hawk Peak. Ị nwekwara ike iwepụta oge na enyi ọhụrụ: onye na-agwụ ike, onye na-eto eto na-achọsi ike nke na-enye gị ohere isoro gị ka ị na-agafe ogige ahụ. Mkpakọrịta mụ na Claire na-atọ ụtọ nke ukwuu ma mee ka m mụmụọ ọnụ ọchị nwa oge.
Ọtụtụ egwuregwu na-achọkarị ịnye ihe ndị ọzọ, mgbe ụfọdụ na-ere ahịa oke egwu, ma ọ bụ n'omume octane dị elu ma ọ bụ site na nnukwu akụkọ akụkọ dị egwu nke na-etinye gị n'ọnọdụ dị egwu. Mana ọ bụ obere akụkọ na ahụmịhe kwa ụbọchị nke A Short Hike na-enye egwuregwu ahụ nkasi obi ya na ọbụnadị nke ọzụzụ atụrụ. Ọ bụ maka ịchọ mmekọrịta dị jụụ na okike ọbụlagodi na ị na-eme njem umpteenth gị n'elu, ma ọ bụ nweta mmezu ka ị na-asụ ngọngọ n'obere ntọala ndị mara mma. Ọ na-atụ aro na ọbụna obere obere na nke kacha nta nwere ike ịbụ ihe na-atọ ụtọ dị ka nnukwu eluigwe na ala na akụkọ egwuregwu kachasị egwu. Ka m na-abanye na njem ntụrụndụ ọzọ ka m rigoro n'elu elu Hawk Peak, enweghị m ike ịnyere aka kama ikwenye kpamkpam.
Download A obere ije
Chọọ site na olu - Ngwa ngwa ngwa ngwa ịchọta ihe ịchọrọ ile anya site na iji nyocha olu.